ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း | Zneng
အထည်ချုပ်ထုတ်လုပ်မှုစက်များ အထည်အလိပ်များသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများအားချည်နှောင်ခြင်းနှင့်အတူ throads နှင့်အတူ pextiles သို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများချုပ်နိုင်သည့်အထည်အလိပ်များအတွက်စက်များဖြစ်သည်။ Zneng တွင်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုစက်များထုတ်လုပ်ခြင်းစက်ကိရိယာများထုတ်လုပ်ခြင်း, စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်, အဝတ်လုပ်စက်၏ကုန်ကျစရိတ်မှာအနိမ့်ကျပြီးအလိုအလျောက်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကြွယ်ဝသည်။
Zneng သည်နောက်ဆုံးပေါ်အထည်ထုတ်လုပ်မှုစက်ထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ပြီးအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသောစက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ စျေးနှုန်းများသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလိုအလျောက်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုစက်များသည်ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးစက်များနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်သည်။
tubular t- ရှပ်အင်္ကျီဟမ်ချုပ်စက်
tubular တီရှပ်အနားအပ်ချုပ်စက်။ဒီတီရှပ်ရဲ့ရဲ့ရှပ်အင်္ကျီရဲ့အောက်ခြေဟယ်လီပတ်စက်ဟာအသစ်အဆန်းပဲရှိတယ်။ ရှပ်အင်္ကျီအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပါ, ၎င်းသည်မတူညီသောအရွယ်အစားအတွက်သင့်တော်သည်။ အော်ပရေတာတစ်ခုမှာတစ်ချိန်တည်းတွင်စက်နှစ်လုံးအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
Multi function ကိုစက်မှုအပ်ချုပ်စက်
Multi function ကိုစက်မှုအပ်ချုပ်စက်။ဒီအပ်ချုပ်စက်ကိုအတွေ့အကြုံရှိထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့မှထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်အိတ်ကပ်များကိုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ Placket နှင့်ဘေးထွက်အပေါက်များ။
အကောင်းဆုံးစက်အထည်အပိုင်းပိုင်းဖြတ်စက်။အမြန်နှုန်း - ကားခြေတစ်ချောင်းပြီးအောင်စက္ကန့် ၈၀ သာလိုသည်။ ကားခေါင်မိုးတစ်ခုပြီးမြောက်ရန် ၆ မိနစ်သာလိုသည်။ထိရောက်မှုမြင့်မားခြင်း - သေသည့်မှိုသို့မဟုတ်သေမှိုဖြတ်စက်များမလိုအပ်ပါ။ ဤစက်သည်သားရေ၊ ပုံးအိတ်စသည်ဖြင့်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းပေါ်တွင်အမှတ်အသား၊တန်ဖိုးနည်း: စက်တစ်လုံးသည်ဒီဇိုင်းလုပ်နိုင်သည်၊ လက်စွဲဒီဇိုင်းနှင့်ဖြတ်ခြင်းကိုအစားဖြတ်သည်၊ လုပ်အားကိုသက်သာစေသည်၊ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှု - ဤစက်သည်သားရေ၊ PU၊ ဖိုင်ဘာ၊ EVA၊ XPE၊ ရေမြှုပ်ကောင်၊ ပေါင်းစပ်ဝတ်၊ ရေမြှုပ် + ဒြပ်ပေါင်းပေါင်းစပ်သားရေ၊ PVC ခြေဖမိုး၊ စက္ကူ၊ ပုံး၊ ပလပ်စတစ်ဘုတ်စသည်ဖြင့်ဖြတ်နိုင်သည်။ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်: မြင့်မားသောတိကျသည့်ထိန်သိမ်းနိုင်သောအတောင်၊ ဆူညံသံ၊ တိကျသောထုတ်လွှင့်မှုကိုခံယူပါ။ ရှည်လျားသောသက်တမ်းနှင့်မြင့်မားသောတိကျမှု။
FactoryPrice- အကောင်းဆုံးအလိုအလျောက်အထည်ဖြတ်တောက်စက်ပြင်ပနေရာများသို့သွားသည့်အခါ၎င်းသည်အဆုံးမဲ့ရွေးချယ်မှုများကိုပေးသည်။ ဤထုတ်ကုန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်အကုန်အကျများသောဆောက်လုပ်ရေးမလိုအပ်ဘဲ ၀ င်ငွေတိုးရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဓါးဖြတ်စက်၏အားသာချက်များ：၁။ တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ - အထူနံရံစတုရန်းပြွန်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ပန်းကန်ထားခြင်းဆေးကုသမှု၊ ခုံအိပ်ရာကိုဘေးပတ်လည်ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်း ၅ ခု၊Ruida ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊၃။ လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှုကိုသေချာစေရန်ရိုးရှင်းသောနှင့်လုံခြုံသောလည်ပတ်မှုစနစ်၊၄ ။5. စက်၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ချောမွေ့သောစနစ်ဖြစ်သည်။6. gantry အမျိုးအစားလှုပ်ရှားမှုကိုမွေးစားခဲ့ပြီးအလုပ်စားပွဲပေါ်ရှိပစ္စည်းများကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သဖြင့်အဆင်ပြေပါသည်။၇။ X / Y ၀ င်ရိုးကိုမြင့်မားသောတိကျသည့်ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မြန်သည်။၈။ Z-axis သည်တိကျမှန်ကန်သောနှစ်ဆခွံမာသီးအလိုအလျောက်ရှင်းလင်းရေးဘောလုံးဝက်အူအားဖြင့်တိကျမှန်ကန်စွာမောင်းနှင်သည်။၉။ ဖြတ်စက်သည်စက်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်နှင့်ကြီးမားသောဝန်ကိုထမ်းရန်စတုရန်း linear လမ်းညွှန်ရထားလမ်းကိုအသုံးပြုသည်၁၀။ ဝါယာကြိုးသည်တင်သွင်းထားသောမြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောကာကွယ်ထားသောကေဘယ်ကြိုးကိုအသုံးပြုသည်
စက်ရုံအတွက်အကောင်းဆုံးသောအ ၀ တ်အထည်ဖြတ်စက်ဖြစ်ပါသည်။ပြင်ပနေရာများသို့သွားသည့်အခါ၎င်းသည်အဆုံးမဲ့ရွေးချယ်မှုများကိုပေးသည်။ ဤထုတ်ကုန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်အကုန်အကျများသောဆောက်လုပ်ရေးမလိုအပ်ဘဲ ၀ င်ငွေတိုးရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဓါးဖြတ်စက်၏အားသာချက်များ：၁။ တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ - အထူနံရံစတုရန်းပြွန်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ပန်းကန်ထားခြင်းဆေးကုသမှု၊ ခုံအိပ်ရာကိုဘေးပတ်လည်ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်း ၅ ခု၊Ruida ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊၃။ လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှုကိုသေချာစေရန်ရိုးရှင်းသောနှင့်လုံခြုံသောလည်ပတ်မှုစနစ်၊၄ ။5. စက်၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ချောမွေ့သောစနစ်ဖြစ်သည်။6. gantry အမျိုးအစားလှုပ်ရှားမှုကိုမွေးစားခဲ့ပြီးအလုပ်စားပွဲပေါ်ရှိပစ္စည်းများကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သဖြင့်အဆင်ပြေပါသည်။၇။ X / Y ၀ င်ရိုးကိုမြင့်မားသောတိကျသည့်ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မြန်သည်။၈။ Z-axis သည်တိကျမှန်ကန်သောနှစ်ဆခွံမာသီးအလိုအလျောက်ရှင်းလင်းရေးဘောလုံးဝက်အူအားဖြင့်တိကျမှန်ကန်စွာမောင်းနှင်သည်။၉။ ဖြတ်စက်သည်စက်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်နှင့်ကြီးမားသောဝန်ကိုထမ်းရန်စတုရန်း linear လမ်းညွှန်ရထားလမ်းကိုအသုံးပြုသည်၁၀။ ဝါယာကြိုးသည်တင်သွင်းထားသောမြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောကာကွယ်ထားသောကေဘယ်ကြိုးကိုအသုံးပြုသည်
ထုတ်လုပ်သူဖြတ်တောက်ခြင်း Professional အဝတ်ပုံစံ
ထုတ်လုပ်သူဖြတ်တောက်ခြင်း Professional အဝတ်ပုံစံ။မူရင်းဒီဇိုင်းတွင်အသေးစိတ်ကိုဆန်းစစ်ထားသည်။ ဓါးဖြတ်စက်၏အားသာချက်များ：၁။ တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ - အထူနံရံစတုရန်းပြွန်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ပန်းကန်ထားခြင်းဆေးကုသမှု၊ ခုံအိပ်ရာကိုဘေးပတ်လည်ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်း ၅ ခု၊Ruida ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊၃။ လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှုကိုသေချာစေရန်ရိုးရှင်းသောနှင့်လုံခြုံသောလည်ပတ်မှုစနစ်၊၄ ။5. စက်၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ချောမွေ့သောစနစ်ဖြစ်သည်။6. gantry အမျိုးအစားလှုပ်ရှားမှုကိုမွေးစားခဲ့ပြီးအလုပ်စားပွဲပေါ်ရှိပစ္စည်းများကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သဖြင့်အဆင်ပြေပါသည်။၇။ X / Y ၀ င်ရိုးကိုမြင့်မားသောတိကျသည့်ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မြန်သည်။၈။ Z-axis သည်တိကျမှန်ကန်သောနှစ်ဆခွံမာသီးအလိုအလျောက်ရှင်းလင်းရေးဘောလုံးဝက်အူအားဖြင့်တိကျမှန်ကန်စွာမောင်းနှင်သည်။၉။ ဖြတ်စက်သည်စက်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်နှင့်ကြီးမားသောဝန်ကိုထမ်းရန်စတုရန်း linear လမ်းညွှန်ရထားလမ်းကိုအသုံးပြုသည်၁၀။ ဝါယာကြိုးသည်တင်သွင်းထားသောမြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောကာကွယ်ထားသောကေဘယ်ကြိုးကိုအသုံးပြုသည်
ရော်ဘာဖြတ်တောက်ခြင်း။တည်ငြိမ်သောသည်၎င်း၏အီလက်ထရွန်၏ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ CNC အထည်ဖြတ်တောက်စက်ကိုပျော့ပျောင်းသောဖန်သား၊ ထုပ်ပိုးသေတ္တာများ၊ PVC panesl၊ gaskets, သားရေ၊ ကြမ်းခင်းစသည့်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်တောက်ရန်အသုံးပြုသည်။အာမခံနှင့်ရောင်းချမှုဝန်ဆောင်မှု:Pre- ရောင်းချမှုဝန်ဆောင်မှု1.Free နမူနာဖြတ်တောက်ခြင်း / စမ်းသပ်ခြင်း စက်ကိုသင်မ ၀ ယ်ခင်သင်၏နမူနာများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များကို CAD ဂရပ်ဖစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့ပို့ပေးပါ။ ဤတွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်သင်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုပြသရန်ဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်မည်။2.Customized စက်ဒီဇိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောစက်ကိုလက်ခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ရှိပြီးသင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်အားအကြံဥာဏ်များပေးနိုင်သည်။၃ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ကျန်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီစက်စစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု1. ပစ္စည်းအာမခံသည် shippment နေ့မှ 12 လအကြာဖြစ်သည်။ အာမခံကာလအတွင်းအဓိကအသုံးအဆောင်များ (၀ တ်ဆင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများမှအပ) ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအောက်ရှိအရည်အသွေးပြproblemsနာများကြောင့်အခမဲ့အစားထိုးသည်။2. ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံရှိသော afer-sale အသင်းရှိပြီးပြီးပြည့်စုံသော after-sale system ရှိသည်။ သငျသညျကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းမည်သည့်ပြproblemsနာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုထောက်ပံ့နိုင်သည်
အဝတ်အစားပုံစံဖြတ်တောက်ခြင်း။ဓါးဖြတ်စက်၏အားသာချက်များ：၁။ တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ - အထူနံရံစတုရန်းပြွန်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ပန်းကန်ထားခြင်းဆေးကုသမှု၊ ခုံအိပ်ရာကိုဘေးပတ်လည်ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်း ၅ ခု၊Ruida ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊၃။ လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှုကိုသေချာစေရန်ရိုးရှင်းသောနှင့်လုံခြုံသောလည်ပတ်မှုစနစ်၊၄ ။5. စက်၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ချောမွေ့သောစနစ်ဖြစ်သည်။6. gantry အမျိုးအစားလှုပ်ရှားမှုကိုမွေးစားခဲ့ပြီးအလုပ်စားပွဲပေါ်ရှိပစ္စည်းများကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သဖြင့်အဆင်ပြေပါသည်။၇။ X / Y ၀ င်ရိုးကိုမြင့်မားသောတိကျသည့်ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မြန်သည်။၈။ Z-axis သည်တိကျမှန်ကန်သောနှစ်ဆခွံမာသီးအလိုအလျောက်ရှင်းလင်းရေးဘောလုံးဝက်အူအားဖြင့်တိကျမှန်ကန်စွာမောင်းနှင်သည်။၉။ ဖြတ်စက်သည်စက်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်နှင့်ကြီးမားသောဝန်ကိုထမ်းရန်စတုရန်း linear လမ်းညွှန်ရထားလမ်းကိုအသုံးပြုသည်၁၀။ ဝါယာကြိုးသည်တင်သွင်းထားသောမြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောကာကွယ်ထားသောကေဘယ်ကြိုးကိုအသုံးပြုသည်
သားရေထည်ဖြတ်တောက်ခြင်း - cnc ဓါးဖြတ်စက်
သားရေထည်ဖြတ်တောက်ခြင်း။ စျေးကွက်ထဲမှရပ်တည်ရန်ကူညီပေးသည်။အမြန်နှုန်း - ကားခြေတစ်ချောင်းပြီးအောင်စက္ကန့် ၈၀ သာလိုသည်။ ကားခေါင်မိုးတစ်ခုပြီးမြောက်ရန် ၆ မိနစ်သာလိုသည်ထိရောက်မှုမြင့်မားခြင်း - သေသည့်မှိုသို့မဟုတ်သေမှိုဖြတ်စက်များမလိုအပ်ပါ။ ဤစက်သည်သားရေ၊ ပုံးအိတ်စသည်ဖြင့်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းပေါ်တွင်အမှတ်အသား၊တန်ဖိုးနည်း: စက်တစ်လုံးသည်ဒီဇိုင်းလုပ်နိုင်သည်၊ လက်စွဲဒီဇိုင်းနှင့်ဖြတ်ခြင်းကိုအစားဖြတ်သည်၊ လုပ်အားကိုသက်သာစေသည်၊ကျယ်ပြန့်သောအသုံးချမှု - ဤစက်သည်သားရေ၊ PU၊ ဖိုင်ဘာ၊ EVA၊ XPE၊ ရေမြှုပ်သုတ်၊ ပေါင်းစပ်ဝတ်၊ ရေမြှုပ် + ပေါင်းစပ်သားရေ၊ PVC ခြေဖမိုး၊ စက္ကူ၊ ပုံး၊ ပလပ်စတစ်ဘုတ်စသည်ဖြင့်ဖြတ်နိုင်သည်။ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်: မြင့်မားသောတိကျသည့်ထိန်သိမ်းနိုင်သောအမြန်နှုန်း၊ ဆူညံသံနည်းခြင်း၊ ရှည်လျားသောသက်တမ်းနှင့်မြင့်မားသောတိကျမှု။
စက္ကူ၊ အ ၀ တ်နှင့်သားရေဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အမြှုပ်ထားသည့်ရာဘာစာဖြတ်စက်ကိုအသုံးပြုသည်
ဓါးဖြတ်စက်၏အားသာချက်များ：၁။ တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ - အထူနံရံစတုရန်းပြွန်ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဘေးထွက်ပန်းကန်ထားခြင်းဆေးကုသမှု၊ ခုံအိပ်ရာကိုဘေးပတ်လည်ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်း ၅ ခု၊Ruida ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ မြင့်မားသောယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊၃။ လည်ပတ်မှုမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှုကိုသေချာစေရန်ရိုးရှင်းသောနှင့်လုံခြုံသောလည်ပတ်မှုစနစ်၊၄ ။5. စက်၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ချောမွေ့သောစနစ်ဖြစ်သည်။6. gantry အမျိုးအစားလှုပ်ရှားမှုကိုမွေးစားခဲ့ပြီးအလုပ်စားပွဲပေါ်ရှိပစ္စည်းများကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်နိုင်သဖြင့်အဆင်ပြေပါသည်။၇။ X / Y ၀ င်ရိုးကိုမြင့်မားသောတိကျသည့်ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မြန်သည်။၈။ Z-axis သည်တိကျမှန်ကန်သောနှစ်ဆခွံမာသီးအလိုအလျောက်ရှင်းလင်းရေးဘောလုံးဝက်အူအားဖြင့်တိကျမှန်ကန်စွာမောင်းနှင်သည်။၉။ ဖြတ်စက်သည်စက်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန်နှင့်ကြီးမားသောဝန်ကိုထမ်းရန်စတုရန်း linear လမ်းညွှန်ရထားလမ်းကိုအသုံးပြုသည်၁၀။ ဝါယာကြိုးသည်တင်သွင်းထားသောမြင့်မားသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောကာကွယ်ထားသောကေဘယ်ကြိုးကိုအသုံးပြုသည်
သားရေ၊ စက္ကူ၊ ရာဘာ၊ အ ၀ တ်အစား၊
ကျွန်ုပ်တို့၏ CNC အထည်ဖြတ်တောက်စက်ကိုပျော့ပျောင်းသောဖန်သား၊ ထုပ်ပိုးသေတ္တာများ၊ ပလတ်စတစ်အိတ်များ၊ gaskets၊ သားရေ၊ ကြမ်းခင်းစသည့်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်တောက်ရန်အသုံးပြုသည်။အာမခံနှင့်ရောင်းချမှုဝန်ဆောင်မှု:Pre- ရောင်းချမှုဝန်ဆောင်မှု1.Free နမူနာဖြတ်တောက်ခြင်း / စမ်းသပ်ခြင်း စက်ကိုသင်မ ၀ ယ်ခင်သင်၏နမူနာများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များကို CAD ဂရပ်ဖစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသို့ပို့ပေးပါ။ ဤတွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်သင်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏ထိရောက်မှုကိုပြသရန်ဗီဒီယိုတစ်ခုပြုလုပ်မည်။2.Customized စက်ဒီဇိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ထားသောစက်ကိုလက်ခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ရှိပြီးသင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်အားအကြံဥာဏ်များပေးနိုင်သည်။၃ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ကျန်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီစက်စစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။ရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု1. ပစ္စည်းအာမခံသည် shippment နေ့မှ 12 လအကြာဖြစ်သည်။ အာမခံကာလအတွင်းအဓိကအသုံးအဆောင်များ (၀ တ်ဆင်ထားသည့်အစိတ်အပိုင်းများမှအပ) ပုံမှန်လည်ပတ်မှုအောက်ရှိအရည်အသွေးပြproblemsနာများကြောင့်အခမဲ့အစားထိုးသည်။2. ကျွန်ုပ်တို့တွင်အတွေ့အကြုံရှိသော afer-sale အသင်းရှိပြီးပြီးပြည့်စုံသော after-sale system ရှိသည်။ သငျသညျကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းမည်သည့်ပြproblemsနာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှုထောက်ပံ့နိုင်သည်